मेरो घरमा को वास गरेको छ? मेरो खातिर को खडा भएको छ? मेरो पक्षमा कसले कष्ट भोगेको छ? कसले मेरो अघि आफ्‍नो वचनको प्रतिज्ञा दिएको छ? मलाई वर्तमानसम्‍म पछ्याएर पनि को उदासीन भएको छैन? किन सबै मानिस चीसो र असंवेदनशील छन्? किन मानवजातिले मलाई त्यागेको छ? किन मानवजाति मप्रति थकित भएको छ? किन मानव संसारमा कुनै न्यानोपन छैन? सियोनमा हुँदा, मैले स्वर्गको न्यानोपनलाई चाखेको छु, र सियोनमा हुँदा मैले स्वर्गको आशिष्‌को आनन्द लिएको छु। फेरि, म मानवजातिको बीचमा जिएको छु, मैले मानवजातिको संसारको तीतोपनलाई चाखेको छु, र मानिसहरूका बीचमा रहेका सबै फरक-फरक अवस्थाहरूलाई मैले मेरै आँखाले देखेको छु। जसरी म “परिवर्तन भएको छु” त्यसरी नै थाहै नपाई मानवजाति परिवर्तन भएको छ र यसरी मात्रै ऊ वर्तमानको दिनमा आइपुगेको छ। मानिसले मेरो खातिर कुनै पनि कुरा गर्न सकोस् भन्‍ने माग म गर्दिनँ, नत मेरो लेखामा उसले कुनै वृद्धि गरोस् भन्‍ने माग नै म गर्छु। उसले मेरो योजनाअनुसार काम गर्न सकोस्, मेरो अवज्ञा नगरोस् वा मेरो लागि लाजको प्रतीक नबनोस्, तर मेरो लागि सानदार साक्षी बनोस् भन्‍ने मात्रै म चाहन्छु। मानिसहरूका बीचमा, मेरो लागि असल साक्षी दिने र मेरो नामलाई महिमित तुल्याउने मानिसहरू पनि छन्, तर मानिसको अभ्यासहरू वा आचरणले मेरो हृदयलाई कसरी सन्तुष्ट तुल्याउन सक्छ र? उसले कसरी मेरो हृदयअनुसार हुन वा मेरो इच्‍छालाई सन्तुष्ट गर्न सक्छ र? पृथ्वीका पहाडहरू अनि समुद्र र नदीहरू, र पृथ्वीका फूलहरू, घाँसपात र रूखहरू सबैले मेरा हातका कार्यलाई देखाउँछन्, सबै मेरो नामको खातिर अस्तित्वमा छन्। तैपनि मानिसले किन मेरो मागको मापदण्डलाई पूरा गर्न सक्दैन? के त्यसको घृणित नीचपनले गर्दा हो? के त्यसलाई मैले उचालेकोले हो? के म त्योप्रति अत्यन्तै निर्दयी भएकोले हो? किन मानिस सँधै मेरा मागहरूप्रति भयभीत हुन्छ? आज, राज्यका धेरै मानिसहरूमध्ये, किन तँ मात्रै मेरो आवाजलाई सुन्छस् तर मेरो अनुहारलाई हेर्न चाहँदैनस्? किन तँ मेरा वचनहरूलाई हेर्छस् मात्रै तर त्यसलाई मेरो आत्मासँग मिलाउँदैनस्? किन तैँले मलाई यसरी स्वर्गमा र पृथ्वीमा अलग गर्छस्? के पृथ्वीमा हुँदा, म स्वर्गमा जस्तो हुन्छु त्यस्तो नभएकोले हो? के स्वर्गमा हुँदा म पृथ्वीमा आउन नसक्‍ने हुनाले हो? के पृथ्वीमा हुँदा, म स्वर्गमा लान नसक्ने भएकोले हो? यो त पृथ्वीमा हुँदा, म नीच प्राणी हुँ झैँ, स्वर्गमा हुँदा म उच्‍च प्राणी हुँ झैँ, र स्वर्ग र पृथ्वीको बीचमा जोडिन नसक्‍ने दरार छ झैँ भो। तैपनि मानिसको संसारमा यी कुराहरूको व्युत्पत्तिको बारेमा तिनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन जस्तो देखिन्छ, तर मेरा वचनहरू आवाज मात्रै हुन् र कुनै अर्थ नै छैन झैँ गरी तिनीहरू सँधै मेरो विरुद्धमा हिँडिरहेका हुन्छन्। मेरो बाहिरी स्वरूपमा आफै अनुसन्धान गर्दै, सारा मानवजातिले मेरा वचनहरूमा प्रयास गर्छन्, तर तिनीहरू सबै असफल हुन्छन्, तिनीहरूका प्रयासहरूले कुनै फल फलाउँदैन, बरु तिनीहरू मेरा वचनहरूको प्रहारद्वारा लड्छन् र फेरि उठ्ने आँट गर्दैनन्।
जब म मानवजातिको विश्‍वासलाई जाँच गर्छु, साँचो साक्षी दिने एक जना पनि हुँदैन, आफ्‍नो सम्पूर्णता समर्पित गर्नको लागि एक जना पनि सक्षम हुँदैन; बरु, मैले त्यसको हृदयलाई मोहित गर्न गइरहेको थिएँ झैँ गरी मानिस निरन्तर रूपमा आफूलाई लुकाउँछ र आफूलाई खुलासा गर्न इन्कार गर्छ, मानौं। आफ्‍नो परीक्षाको बेला अय्यूब समेत कहिल्यै पनि साँचो रूपमा दृढ भएर खडा हुन सकेन, न त कष्टको बेला उसले मिठास छर्न नै सक्यो। वसन्तको न्यानोपनमा सबै मानिसहरूले हरियालीको फिक्‍का झलक पैदा गर्छन्; हिउँदको चिसो प्रहारमा तिनीहरू कहिल्यै पनि हरियाली रहँदैनन्। आफ्‍नो हाडे र दुर्बल कदद्वारा, मानिसले मेरो अभिप्रायलाई पूरा गर्न सक्दैन। सारा मानवजातिमा, अरूको लागि नमुनाको रूपमा काम गर्न सक्‍ने कोही पनि छैन, किनभने सबै मानिस आधारभूत रूपमा उस्तै छन् र तिनीहरू एक-अर्काबाट फरक छैनन् अर्थात् तिनीहरूलाई एक अर्कामा छुट्टाउने कुरा नगन्य छ। यसकारणले गर्दा, आज पनि मानिसहरू मेरा कार्यहरूलाई पूर्ण रूपमा जान्‍न असमर्थ छन्। मेरो सजाय सारा मानवजातिमाथि परेपछि मात्रै तिनीहरू थाहा नपाई मेरा कार्यहरूको बारेमा सचेत हुन्छन्, र मैले केही नगरिकन वा कसैलाई बाध्य नगरिकन, मानिसले मलाई जान्‍नेछ, र त्यसद्वारा मेरा कार्यहरूलाई देख्‍नेछ। मेरो योजना यही नै हो, प्रकट गरिएको मेरो कार्यहरूको पक्ष यही नै हो, र मानिसहरूले जान्‍नुपर्ने कुरा यही नै हो। राज्यमा, सृष्टिका असंख्य थोकहरू पुनर्जीवित हुन र आफ्‍नो जीवनको शक्तिलाई फेरि प्राप्त गर्न थाल्छन्। पृथ्वीको अवस्थाको परिवर्तनहरूको कारण, एउटा मुलुक र अर्को मुलुक बीचको सिमानाहरू पनि सर्न थाल्छन्। जब एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुक विभाजित हुन्छ, र एउटा मुलुक अर्को मुलुकसँग जोडिन्छ, सारा राष्ट्रहरूलाई टुक्रा-टुक्रा हुने गरी मैले प्रहार गर्ने समय यही नै हुनेछ भनेर मैले अगमवाणी गरेको छु। यो समयमा, म सारा सृष्टिलाई नवीकरण गर्नेछु र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई भाग-भाग गर्नेछु, जसद्वारा ब्रह्माण्डलाई व्यवस्थित गर्नेछु र पुरानोलाई नयाँमा रूपान्तरण गर्नेछु—मेरो योजना यही नै हो र मेरा कामहरू यिनै हुन्। जब संसारका राष्ट्रहरू र मानिसहरू मेरो सिंहासन अघि फर्कन्छन्, तब म स्वर्गका सारा उदारता लिनेछु र मानव संसारलाई यो प्रदान गर्नेछु, ताकि मैले गर्दा संसार अतुलनीय उदारताले भरिनेछ। तर जबसम्‍म पुरानो संसार निरन्तर अस्तित्वमा रहन्छ, यसका राष्ट्रहरूमाथि म मेरो क्रोध बर्साउनेछु, ब्रह्माण्डभरि म मेरा प्रशासनिक आदेशहरूलाई जारी गर्नेछु, र तिनलाई उल्‍लङ्घन गर्ने जोकोहीलाई सजाय दिनेछु: